China Fithem ks-016 Ikuku stereo neckband bluetooth Chip 5.0 sports headphone emepụta na suppliers | Kaiwansi
Tws ntị ntị
Igwe nti ntị olu
Ks-012 egwuregwu egwuregwu egwuregwu ikuku wireless ekweisi bluetoo ...
Fithem Ks-009SBluetooth wireless egwuregwu ịgba mmiri s ...
Fithem ks-020 Bluetooth wireless wireless earphone onyeisi ụgbọ mmiri ...
Fithem ks-016 Ikuku stereo neckband Bluetooth Chi ...
Fithem ks-016 Ikuku stereo neckband bluetooth Mgbapu 5.0 sports headphone
Fechaa na wireless wireless ụtọ. Neckband wireless Bluetooth ekweisi waterproof ọkwa IPx5 mgbawa QCC3003 / 3024 ma ọ bụ BK3266 sọrọ batrị nwere ike ime ka playback oge aba. Anyị bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa nwere asambodo ngwaahịa dịka CE na asambodo ndị ọzọ.
1. ks-016 ngwaahịa iwebata
Ndụ batrị siri ike na otu ụgwọ Magnetic absorption nano jụrụ iji kechie Bluetooth 5.0 ngwa ngwa nnyefe 3D ọdịyo na ịnụ ụtọ ọ Dụ Dual batrị batrị nwere ike igwu egwu ogologo oge, egwu na-awụ akpata oyi n'ahụ na-enweghị ọnwụ.
2. ks-016 oke
Horn dayameta Ø10MM
Ike batrị 110mAh
Versiondị Bluetooth V5.0
Oge ojiji 6-8hours
Oge nkwụ ụgwọ 1-1.5hour
Oge njikere 150hours
3. Ks-016 atụmatụ na ngwa
Ihe a na-eme n'ihu na-ebelata nsogbu ịma jijiji, obere oge dị nro, olu mmadụ ka mma, nwee ọ ofụ nke egwu combinationdị ngwakọta nke carbon fiber composite vibration + teknụzụ dị egwu na-agbanwe agbanwe, na-ada ụda n'okpuru ọrụ ndọta na ọkụ eletrik , ma weghachite ụda na-enwu gbaa nke egwu, Oge etiti oge juputara, obere oge dị oke ma gbanwee.
4. Ks-016 ngwaahịa nkọwa
Ncheta olu hanga na-agbanwe na curved. A na-eji olu ọgwụ silicone silicone mee olu akwa ahụ, nke dị nro dịka akpụkpọ anụ nwa, na-ekpo ọkụ ma dị mma, kwụsie ike na ntụkwasị obi. Enwere ike ịgba ya akwụkwọ na sekọnd ma nwee ndụ batrị siri ike. Ihe nlere ọ bụla doro anya ma dị ọcha.
5. Ngwongwo bass bara ọgaranya, a na-anọchi anya elu elu ugboro ugboro, na ọgaranya Mezzo, dị ezigbo mma. Ọrụ dị mfe nke etiti na-emekwa ka ndị ọrụ nwee mmetụta dị mfe iji, ogo dị mma na-agbasakwa n'elu 10 na otu ụlọ ọrụ ahụ, ọkụ eletrik bụ 110mAh nwere ike ịgbasa 12 awa batrị dịkwa oke nchekwa, ngwaahịa ahụ nwekwara ụfọdụ usoro dị ka akwụkwọ ikike, ị na-nnọọ ka ịkpọ na zụọ.
Osote: Fithem ks-020 Bluetooth ikuku ikuku ntị ntị onyeisi ụgbọ mmiri Oge ezumike egwuregwu ekweisi
FITHEM KS-015 wireless ekweisi isi magnetik na-adọrọ adọrọ ...
FITHEM KS-010 Ikuku Bluetooth headphone larg ...
Fithem Ks-009SBluetooth wireless egwuregwu egwuregwu waterpr ...
Okwu: 2nd Ft, No.149, Shahe Avenue, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province, China